ट्रक भित्र ३९ वटा शव कहाँबाट आयो ? - Vishwa News
ट्रक भित्र ३९ वटा शव कहाँबाट आयो ?
लण्डन । बुधबार बेलायतको राजधानी लन्डनमा एक ट्रक भित्र ३९ शव बरामद भयो । ट्रक चालक २५ वर्षिय एक यूवक पनि पक्राउ परे ।
यस घटनाले विश्वलाई भयभित मात्र पारेको छैन, आखिर अति विकसित मुलुक बेलायतमै यो अमानवीय घटना कसरी भयो भने जिज्ञासा समेत उत्पन्न गराएको छ ।
ट्रक बेल्जियमबाट जहाजमा चढाएर वेलायत पुगेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । तर, बेल्जियमा चाँही कसरी आयो, त्यसको बेल्जियममा किन चेकजाँच भएन र शवहरु लण्डन पुगे भन्ने प्रश्नले धेरैलाई अचम्मित समेत बनाइरहेको छ ।
बेलायती संचारमाध्यममा ट्रक पुर्वी युरोपियन मुलुक बुल्गेरियाबाट आएको उल्लेख छ । यद्दपी यसको पुष्टी हुन बाँकि छ । प्रहरीले ट्रक चालक २५ वर्षिय आइरिस नागरिक मो रबिन्सनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको बताएको छ ।
यूरोपमा मानव तस्करहरुले गरिब मुलुककाा प्रवासीलाई लैजाने क्रममा यस्ता घटना बारम्वार हुने गरेका छन् । खासगरी द्धन्द्धग्रस्त मुलुकबाट धेरै नागरिक शान्तीको खोजीमा यूरोप छिर्न खोज्छन् ।
तर, उनीहरुको अमानवीय तरिकाले हत्या हुने गरेको छ । सन् २००० बेलायत मै एक ट्रक भित्र ५८ चिनियाँ नागरिकको शव फेला परेको इतिहासलाई संचारमाध्यमले बुधबार पनि सम्झिएका छन ।
नेपाल र चाइनिज ताइपेई मैत्रीपूर्ण फूटबल खेल्ने, मलेसियासँग पराजित